Ndiani anokubatsira kana uine mhosva yemutemo? | Law & More BV
Kune akawanda mamiriro ezvinhu umo mutemo wematsotsi unotora chikamu muhupenyu hwedu. Ndokusaka tichiwanzosangana nazvo netsaona. Semuenzaniso, iwe unogona kufunga nezvemamiriro ezvinhu umo iwe wakamwa imwe yakawandisa uye wakasarudza kutyaira. Kana iwe ukasungwa mushure mekutarisa doro iwe une dambudziko. Pakadaro unogona kubhadhariswa mari kana kutora mharidzo.
NEZVINODA ZVEMWE MARI MUTAURO?
Kune akawanda mamiriro ezvinhu umo mutemo wematsotsi unotora chikamu muhupenyu hwedu. Ndokusaka tichiwanzosangana nazvo netsaona. Semuenzaniso, iwe unogona kufunga nezvemamiriro ezvinhu umo iwe wakamwa imwe yakawandisa uye wakasarudza kutyaira. Kana iwe ukasungwa mushure mekutarisa doro iwe une dambudziko. Pakadaro unogona kubhadhariswa mari kana kutora mharidzo. Chimwe chinowanzoitika ndechekuti nekuda kwekusaziva kana kusava nehanya, mabhegi evatambi ane zvinyorwa zvinorambidzwa zvinotorwa kuzororo, zvinhu kana mari zvinoratidzwa zvisizvo. Pasinei nechikonzero, mhedzisiro yezviito izvi inogona kunge yakakomba, uye iyo mhosva inogona kupfuurira kusvika huwandu hweEUR 8,200.
> Akundwa nemutemo wematsotsi
> Traffic tsotsi mutemo
> Corporate Criminal Mutemo
Sewemabhizimusi kana mukuru wekambani unogona kusangana nemutemo wehutsotsi semugariro wenzvimbo yako yebhizinesi. Izvi zvinogona kunge zvirizvo, mushure mekusimbiswa nevatambi vane hunyanzvi, kambani yako inofungidzirwa nezvehutsinye kana kutakurwa kusingawanzo. Zvakare, kutora chikamu mune bhizinesi renyika kunogona kutungamira nekusaziva hupfumi kana kutyora mutemo wezvakatipoteredza ungashanda kune rako bhizinesi. Zviito zvakadaro zvinogona kuva nemhedzisiro yakakomba kune yako kambani uye zvinotungamira kune kwakanyanya faindi. Iwe unozviwana iwe uri mune iyi mhando yemamiriro ezvinhu kana iwe unoda rumwe ruzivo? Ndokumbirawo usazeza kubvunza magweta emhosva a Law & More.
Hunyanzvi hwevamiriri vemitemo yemhosva Law & More
Traffic tsotsi mutemo
Uri kupomerwa kutyaira uchitungamirwa nedoro kana zvinodhaka? Kumbira rubatsiro rwedu rwepamutemo.
Uri kupomerwa mhosva yekunyepa here? Tinogona kukupa zano
Corporate tsotsi mutemo
Iwe unoisa mungozi zvemakambani emutemo matsotsi nyaya? Tinogona kukubatsira
Wakatukwa here? Kutanga nyaya yepamutemo
akaita kuti ive yakakwana kune yangu
kambani diki. Ini ndichasimba
kurudzira Law & More
kune chero kambani iri mukati
Akundwa nemutemo wematsotsi
Izvo zvinogona zvakare kuitika kuti iwe unosangana nemutemo wematsotsi kubva kune iwo 'akabatwa' maonero. Mazuva ano tinoita zvakawanda kutenga kuburikidza ne internet. Kazhinji zvinofamba zvakanaka uye unowana izvo zvawakaraira. Nehurombo, dzimwe nguva zvinokanganisa: iwe wakabhadhara mari yakawanda kune zvimwe zvinhu zvakadai serunhare kana laptop, asi mutengesi haana kutongoendesa zvinhu uye haasi kuda kuzviita. Mushure mezvose, kana iwe uchida kuzivisa kuti zvinhu zvako zviri kupi, mutengesi hapana kwaanowanikwa. Mukudaro iwe unogona kunge uri munhu akabatwa nematsotsi matsotsi.
Mune mamiriro ezvinhu umo iwe unosangana netsaona yemutemo wetsotsi, zvinokurudzirwa kuti ubate nyanzvi yegweta Law & More. Chero chiitiko mumamiriro ezvemitemo yematsotsi chinogona kunge chakanyanya uye zviito mukutongwa kwemhosva zvinoteedzana nekukurumidza. At Law & More isu tinonzwisisa kuti zviitiko zvemutemo wematsotsi zvinogona kuve nechinetso chikuru pahupenyu hwako uye ndosaka tichifunga nezvekugadzirisa dambudziko remutengi nekukurumidza uye zvinobudirira. Iwo magweta emutemo at Law & More vanofara kukupa rubatsiro rwemutemo munzvimbo dze:
• Turakiti yemutemo tsotsi;
• Mhosva yemutemo yemakambani
Semutyairi wemotokari iwe unofanirwa kuramba kubva kune hunenjodzi maitiro. Maitiro akadaro anowanzoitika kana paine kunwa doro mumigwagwa. Vanhu vanogara vachipinda shure kwevhiri remota mushure mekunwa zvakanyanya. Uri kusungwa mushure mekutarisa doro here kana kuti uri kupihwa chirango kana kusamanikidzwa? Ipapo kuchenjera kuzvipa iwe negweta nyanzvi. Mushure mezvose, kutyaira uchimanikidzwa kwedoro kunorangwa nezvirango zvakakomba izvo zvinogona kumhanya kusvika kumwedzi mitatu mutirongo kana faindi yeEUR 8,300 uye iwe ungatowana kumiswa kwekutyaira. Nekudaro, zvinogoneka kuti panguva yekubvunzurudzwa kana panguva yekunwa doro mirawo iri kutyorwa nemapurisa nevatongi. Izvo zvinogona kunge zviri izvo zvakaitika kuti doro bvunzo harisi kupa chiratidzo chakakwana uye rinogona kugadzirisa kubuda. Mune zvimwe zviitiko, iyo faira kana yekumisa kutyaira haishande. Law & More ine nyanzvi dzemagweta mune zvemutemo emigwagwa yematsotsi vanofara kukupa zano kana kukubatsira mukufambiswa. Iwe unogona kuwana rumwe ruzivo nezve iyo njodzi maitiro mune traffic uye kudhakwa kutyaira pane yedu traffic webhusaiti.
Paunofamba kuenda kuNetherlands, iwe unopfuura tsika. Panguva iyoyo, haubvumirwe kutakura zvinhu zvinorambidzwa. Kana zvisiri izvo kana vatungamiriri vetsika vakawana zvinhu zvakarambidzwa nekuda kwekusaziva kana kusava nehanya, mutongo wemhosva unogona kutevedzera. Nyika yekubva kana yako dzinza haina peshure pane iyi nyaya. Zvinonyanya kutarisirwa uye zvakasarudzika zvirango zvakanaka. Kana iwe wagamuchira faindi uye ukasabvuma, unogona kuramba izvi kuDutch Public Prosecution Service mukati memavhiki maviri. Kana iwe ukabhadhara mari yacho nekukasira, unoitawo chikwereti kubvuma. Ichi chikonzero nei zvakakosha kutanga wabvunza gweta nezve mamiriro ako. Chikwata chedu chemagweta chinowana ruzivo rwenyanzvi uye chinogona kukupa zano uye kukutungamira mune chero zviitiko. Iwe unoda here rubatsiro kana une imwe mibvunzo? Ndokumbirawo mubate Law & More. Iwe unogona kuwana rumwe ruzivo nezve njodzi nemhedzisiro yekutora zvinhu zvakarambidzwa mu blog yedu: 'Tsika DzeDutch'.
Corporate Criminal Mutemo
Mazuva ano, makambani ari kuwedzera kutarisana nemutemo wematsotsi. Semuenzaniso, zvingaitika kuti kambani yako inofungidzirwa yekuita mari isiriyo yemitero kana yekutyora mutemo wemamiriro ekunze. Zvinhu zvakadaro zvakaoma uye zvinogona kutungamira kusvika kumhedzisiro inosvika kure, zvose zviri zviviri uye bhizinesi. Mune aya mamiriro ezvinhu, zvakakosha kubvunza gurukota nekukurumidza. Gweta reunyanzvi haringotaridze mabasa ako, sekudaro basa rekupa ruzivo kuvakuru vemitero, asi zvakare ita chokwadi chekuti kodzero dzauinazvo (sekambani), senge kodzero yekuramba wakanyarara, haina kutyorwa. Uri kubata nemutemo wemakororo sekambani uye iwe unoda kurairwa kana rubatsiro rwepamutemo mumamiriro ako ezvinhu? Unogona kuvimba Law & More. Nyanzvi zvedu vane nyanzvi yekuita maitiro uye vanoziva maitiro avanogona kukubatsira iwe mberi.
Mune mamwe mamiriro ezvinhu iwe unganzwe wakakwenenzverwa, semuenzaniso kana watenga zvinhu pa internet, wakabhadhara mari yakawanda uye hauna kumbozvigamuchira, kana zvisiri pamutemo zvetsotsi. Kuti ukwanise kutaura kuti scam ndeye tsotsi mupfungwa yepamutemo, panofanirwa kunge paine zvisiri zvechokwadi kana kunyepa zvinoshandiswa nemutengesi kutengesa chimwe chinhu. Scam inotsanangurwa zviri pamutemo sekutamisa mumwe munhu kuti aunze mari uye zvinhu, pasina chinangwa chekuendesa chero chinhu mukudzoka. Tinoda kuziva kuti chii chatinogona kukuitira? Bata magweta edu. Law & More'magweta ane maitiro ehupenyu uye anogona kuongorora mamiriro ako uye zvaunosarudza.
Wobva watibata parunhare +31 (0) 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar: